SEO ayaa si sahal ah u fududeeyey khabiirka ku takhasusay
Ganacsi kasta si loo isticmaalo isticmaalka ugu badan ee kheyraadkooda, waa inay awoodaan in ay ka faa'iidaystaan ​​ilaha ay heli karaan inta ugu badan. Faa'idadani waxay wax ka tareysaa iyada oo loo marayo hirgelinta xirfadaha internetka muhiimka ah ee internetka. Shirkadaha waaweyn waxay ka faa'iidaystaan ​​iyagoo sameeya shabakado eCommerce oo guuleysta si ay u dhammaystiraan dukaamada jirkooda. Sidoo kale, waxaa jira hababka suuq-geynta internetka oo badan oo webmasters ay u isticmaali karaan inay sameyaan boggooda internetka si ay u helaan muuqaal internet oo wanaagsan. First of dhan, dadka websaydhka ah waxay isticmaali karaan Suuqgeynta content - reseller. Xaaladaha kale, suuq-geynta warbaahinta bulshada waa ficil caadi ah oo ka dhex jira milkiilayaasha bogagga kuwaas oo ku tiirsan fayraska weyn ee soo socda ee ku jira mawduucooda
Search Engine Optimization (SEO) waa farsamooyinka suuq geynta farsamo kaas oo doonaya in lagu qeexo wajigan. SEO wuxuu ka caawin karaa shabakada in ay hesho tone oo ka socda malaayiin baarayaasha caalamka oo raadinaya macluumaad ku jira goobtaada. Marka goobta aad ku jirto matoorada raadinta, waxay heli kartaa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhammaan martida ay ku heli karaan. Waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo waxqabadka istaraatijiyada SEO ee boggaaga ku yaala arrintan. Waxaa intaa dheer, mid ayaa awoodi kara inuu sameeyo website ah inuu helo mudo dheer oo joogto ah macaamiisha online badan.
Ryan Johnson, oo ah khabiirka ugu horreeya ee ka socda Semt Adeegyada Dijital ah, wuxuu qeexayaa qaybo ka mid ah suuqgeynta suuq-geynta:
1. Daraasado muhiim ah
SEO wuxuu ku lugleeyahay baaritaanno loogu talagalay ereyada raadinta si aad uga mid noqoto mawduucaaga. Ereyada waxaa ku jira erayo iyo odhaahyo qaar ka mid ah ereyada oo leh mugga raadinta sare. Xaaladaha kale, waxaad awood u heli kartaa inaad hesho content kaas oo noqon kara faa'iido u ah dadka isticmaala niche bartilmaameedka leh ereyada muhiimka ah ee ay ku qorayaan qadka raadinta Google. Isticmaal ereyada muhiimka ah ee leh tartan daciif ah iyo sidoo kale mugga raadinta sare. Ereyada waxay noqon karaan ereyada dadku u isticmaalayaan boggooda internetka si ay u xaqiijiyaan natiijooyinka mashiinka raadinta s uu ku jiro bogaga internetka
2. Abuurista qoraalka
Ka dib markaad sameysid cilmi-baarisyo muhiim ah, waxaa lagama maarmaan ah inaad abuurto wax qiimo leh ee boggaaga. Isticmaal macluumaadka laga helo ilaha ay dhagaystayaashu ka faa'iideysan doonaan. Hubi in waxyaabaha aad u isticmaashid boggaaga ay leedahay mid muhiim u ah iyo isticmaalka saxda ah ee ereyada muhiimka ah. Erayada muhiimka ah waa inay ku jiraan mawduuc kasta
3. Dib u eegista
Si aad u hesho juice link ka domain kale, waxaad samayn kartaa dib-u-hagaajin wanaagsan. Backlinking waxay ku lug leedahay gaadiidka ilo kale oo laga helo bogaggaaga. Dadku waxay isticmaalaan xeelad sida martigalinta martida si ay u helaan dad kale si ay u gujiyaan xiriirinta goobtaada. Waxaad wanaajin kartaa xiriiriyahaaga macaamilka iyo maamulka domain adiga oo u maraya geedi socodka dib-u-hagaajinta.
SEO waa farsamada suuq-galka saamileyda ah. Shirkadaha waaweyn waxay ka faa'iideystaan ​​isticmaalka SEO ee shabakadooda e-commerce. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu tababaro xirfadaha SEO ee wanaagsan si aad u hesho ugu wanaagsan ee ka mid ah website gaar ah oo aad abuurto. Xaaladaha intooda badan, masters webka waxay ku xiran yihiin qaybo gaar ah oo website ah sida suurtogalnimada in ay sii wadaan bixinta soo-booqdayaasha. Tilmaamahan SEO wuxuu leeyahay habab gaar ah oo ku saabsan sida SEO faa'iido u yahay goobaha iyo sidoo kale siyaabo kala duwan ee darajo aad website. Waxaad awoodi kartaa inaad fuliso qaar ka mid ah SEO-yada waxtarka leh ee boggaaga iyo sidoo kale waxyaabo kale oo muhiim ah oo muhiim u ah waayo-aragnimada boggaaga internetka.